PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-18 - Vela bahleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-18 - IINDABA - NoSonwabo Yawa
HEYI! madoda kubi phandl’ apha yiva mna ndikuxelela.
Ungaze ucinge ukuba umntu uyamazi, nditsho nokuba sewuhleli naye ixesha elide kangakanani.
Uyazi ndikhe ndabona imizi emininzi apho ndikhulele khona iphela vuthu phambi kwam ndijongile, phofu ibe iyimizi endandikhula ndicinga ukuba abantu bakhona baphila kamnandi konwatyiwe, kwaye nam xa sele ndimdala ndinqwenela ukuba ndibe nomzi nekhaya elifana nalowo ndiwujongileyo.
Lo mfo undihlekisa sisakhula, nathi xa efumana enye intombi efikayo ize kutya iiholide ze athumele ileta kwintombi yakhe yalapha ekuhlaleni eyixelela ukuba “NDIYAKWALA, NDIFUMENE UMNTU WOKWENYANI OMHLE KWAYE ONENGQONDO EPHANGALELEYO NENDIBONA IKAMVA KUM NAYE. NDICELA UNDIBUYISELE ZONKE IIFOTO ZAM EZIKUWE!” – ucinga ukuba yaphela amandla le ntombazana?
Yasuka yanikela imvulophu enkulu igcwele iifoto ezinokuya kumashumi asibhozo ubuncinane yabe ibhalile yathi: “UBONA NJE ANDISABUKHUMBULI UBUSO BAKHO, NDICELA UKHETHE EZAKHO IIFOTO UBUYISE EZINYE EZI!” – wadana apho lo mfo wamanzi tixi!
Ukanti yena omnye uzenza umntu kweli nenekazi athi ufuna ukulitshata, nalo livume kube mnandi. Xa umfo omkhulu efuna ukuwela iziko, lale inenekazi lithi bakuliwela iziko emva kokuba betshatile.
Okunene umfo omkhulu akhawulezise ngokulobola kubekwe nosuku lomtshato endibona ukuba umfo lo wayengxamele ukuba ade awele iziko.
Ngemincili ngosuku oluphambi komtshato, ezama ukuzenza umntu othembakeleyo uye wahlambuluka kweli nenekazi “UBONA NJE NDITHI MANDIYITHETHE INYANISO YOKUBA NGAPHAMBI KOKUBA NDIDIBANE NAWE NDANDIKHE NDALALA NABANTU ABALIQELA KUNJALO NJE, QHA KE INGABA BANTU UBAFUMANA ESITALATWENI BETHENGISA NGEMIZIMBA, NDIYAXOLISA SITHANDWA SAM” – limjongile eli nenekazi lasuka lancuma lathi “NDIYATSHO UKUBA OBU BUSO OBU, NDIBUQHELILE!” – wadana lo mfo kuba kwathi kanti uzeka omnye waba bantu wayelala nabo, ebathenga!
Umntu soze umazi ndiyakuxelela.